Product Reviews | The Myanmar Gentlemen Supplies - Men's Grooming – Page 2
Matte Finish နဲ့ ထိန်းအားကောင်းကောင်း High Hold ကိုပေးမည့်၊ USA Made, Suavecito Premium Blends Matte Pomade (အစိမ်းရောင်) ခေါင်းလိမ်းဆီ ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်.... ?
Suavecito Premium Blends Hair Pomade Review
မာတောင့်ခဲသွားခြင်းမရှိ၊ အချိန်နေရာမရွေး ဆံပင်ပြန်ပြင်နိုင်၊ ထိန်းအားကောင်းကောင်း High Hold ကိုပေးပြီး၊ ဆံသားကို Medium Shine နှင့် တောက်ပြောင်နေစေမဲ့၊ USA Made, Suavecito Premium Blends Hair Pomade(အဝါရောင်) ခေါင်းလိမ်းဆီရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်.... ?
May 01, 2018 • Suavecito Review
#mmgents မှရရှိနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် ခေါင်းလိမ်းဆီအမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ ဆံပင်ပြောင်နေတာကိုရှောင်ခြင်ပြီး၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ သဘာဝဆန်ဆန် ဆံပင်ပုံစံဖြီးတတ်သူ ညီအစ်ကိုတို့အတွက် Natural Matte Finish (No shine) ရစေမဲ့ 🔥Suavecito Matte Pomade🔥 ကို ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
Suavecito Matte Pomade ဟာ ဘယ်လိုခေါင်းလိမ်းဆီမျိုးလဲ? ဘယ်လိုတွေအသုံးပြုနိုင်မလဲ? ရဲဘော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအတွက် ဘယ်လိုတွေပံ့ပိုးပြီး အထောက်အကူပြုသွားမလဲဆိုတာတွေကို ဒီ Review မှာ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
အကောင်းဆုံး Strong Hold ထိန်းအားရှိပြီး၊ ဆံသားကို Medium Shine နှင့် တောက်ပြောင်နေစေသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် ခေါင်းလိမ်းဆီ Suavecito Firme Hold Pomade ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်.... ?😏